Powder Lorcaserin Raw (616202-92-7) Mpanamboatra - Chemical Phcoker
Ny vovo-dronono Lorcaserin manta dia an'ny sokajy fanafody fantatra amin'ny anarana hoe agonists mpandray serotonin. Miasa amin'ny fampitomboana ny fahatsapana fahafenoana izany …… ..
Vovoka Lorcaserin manta (616202-92-7) horonantsary
Vovoka Lorcaserin manta (616202-92-7) famaritana
Row Lorcaserin poeta dia sokajin'ny zava-mahadomelina antsoina hoe agonista mpandidy serotonin.It dia miasa amin'ny fampitomboana ny fahatsapana feno mba hahafahana mihinana sakafo tsy misakafo. Raw Lorcaserin poopy dia ampiasaina amin'ny fampiharana doktor, nankatoavin'ny fitondran-tena, ary fandaharam-pamokarana kaloria mba hanampy anao hihena. Ampiasain'ny olona matavy izy io, toy ireo izay mibebaka na manana olana ara-pahasalamana mifandray amin'ny lanjany. Ny fihenan-danja sy ny fihazonana azy dia mety hampihena ny fahasahiranana ara-pahasalamana izay tonga amin'ny fiterahana, anisan'izany ny aretim-po, ny diabeta, ny fiakaran'ny tosi-drà, ary ny fiainana fohy kokoa.
Ny vovo-dronono Lorcaserin dia agonista mpandray 5-HT2C voafantina, ary ny fanandramana in vitro ny zava-mahadomelina dia naneho fisafidianana mety ho an'ny 5-HT2C mihoatra ny tanjona hafa mifandraika amin'izany. plexus, korteks, hippocampus, cerebellum, amygdala, thalamus, ary hypothalamus. Ny fampahavitrihana ireo mpandray 5-HT2C ao amin'ny hypothalamus dia tokony hampihetsika ny famokarana proopiomelanocortin (POMC) ary hampiroborobo ny fihenan-danja amin'ny alàlan'ny fahafaham-po. Ny fanadihadiana ara-pitsaboana dia mampiseho fa ny zava-mahadomelina dia afaka mampihena ny lanjan'ny hatavezina sy ny be loatra amin'ny marary, afaka manatsara ny metabolic mifandraika amin'ny hatavezina, ary mahazaka tsara. Ny vinavinan'ny vovo-dronono Lorcaserin ho an'ny 5-HT2c 5 heny noho ny 2-HT100B (risika aretim-po valvular) dia azo antoka tsara, io no fanafody fahaverezan'ny lanja lanin'ny fahaverezan'ny FDA taorian'ny 5. Tao anatin'ny herintaona fitsaboana vovoka Raw Lorcaserin, ny fihenan'ny lanjany dia 2 ka hatramin'ny 1999 isan-jato.
Product Name Toeram-piompiana omby borosin-koditra
Anarana simika Raw Lorcaserin powder;(R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine
Drug Class serotonine agonists receptors
molekiolan'ny Formula C11H14ClN
molekiolan'ny Wvalo 195.69
Freezing Point Tsy misy data
Ny antsasaky ny biolojia Ny antsasaky ny fiainan'ny plasma dia manodidina ny 11 ora.
Solubility Ny haavon'ny rano dia lehibe noho ny 400 mg / ml.
Storage Temperature -20 ℃ Frizera
Application Ho an'ny fitsaboana ny matavy loatra, ho toy ny fampidiran-tsakafo ho an'ny kaloria fiterahana ary hampitombo ny fiasa ara-batana.